बुद्ध एयरको जहाजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमल पनि थिए ? पाइलट शेर्पासँगको फोटो यसरी भयो भाइरल « Asia Sanchar : Nepal News Live
तर, सोमबार साँझबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वरानी कोमल शाह, बुद्ध एयरका क्याप्टेन आङगेलु शेर्पासहित बुद्ध एयरका कर्मचारीसहितको एउटा तस्वीर भाइरल भएको छ । के पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमल त्यो जहाजमा थिए ? एशिया सञ्चारले फ्याक्ट चेक गरेको छ ।
यात्रुले यसरी सुनाए त्यो दुई घण्टाको अनुभव (हेर्नुहोस् भिडियो)
फोटो भाइरल भएपछि एशिया सञ्चारले पूर्वराजाका सञ्चार सचिव फणिराज पाठकलाई सम्पर्क गरेको थियो । पाठकले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र काठमाडौंमै रहेको बताए । साथै ज्ञानेन्द्र उक्त जहाजमा नरहेको पनि पुष्टि गरे ।